Qaramada Midoobay Oo Cambareysay Duqaymo Lagu Xasuuqay Caruur Badan Oo ka Dhacay Yemen.(Sawiro) – Heemaal News Network
Qaramada Midoobay ayaa cambareysay weerar ka dhacay dalka Yemen oo ay ugu yaran ku dhinteen 29 caruur ah.
Weerarka ayaa lala bartilmaameedsaday gaari Bas ah oo siday caruurtan.
Isbahaysiga ay Sacuudiga hogaamiyaan ayaa weerarkan ku tilmaamay tallaabo militari oo sharci ah.
Waxa ay isbahaysiga intaa ku dareen in weerarka lala bartilmaameedsaday goob ay Xuutiyiinta ka soo riddaan gantaalada ay Sacuudiga la beegsadaan.
Balse hay’adda Qaramada Midoobay ee caruurta ee UNICEF ayaa ku tilmamtay waxa dhacay “mid aan la aqbali Karin “,.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay,Antonio Gutteres ayaa ku baaqay in dhacdadani la baaro.
Isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa waxay tageeraan dowladda Yemen ee dagaalka kula jirto Xuutiyiinta.
Xildhibaan ka Tirsan Baarlamaanka Hindiya Oo Kalfadhi kaga Qayb-galay Dharkii Hitler.(Sawiro)
Xuutiyiinta Oo Wada-hadallo Dheeraad ah ka Dalbaday Dawlada Yemen.
Afhayeen u hadlay kooxda mucaaradka Xuutiyiinta Yemen ayaa sheeegey inay wada hadallo dheeeraad ah la furi doonaan dowladda Yemen, haddii wada hadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda Sweden ay guuleystaan. Maxamed Abdelsalam ayaa […]
Petagonka Maraykana Oo Shaaciyey Shacabkii Ay Laayeen Weeararda Cirka, Weearardii Somalia Oo Ay Dafireen
Warbixin ka soo baxday Pentagon-ka Dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in Sanadkii la soo dhaafay ee 2017 Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo duqeymaha kale ee uu Mareykanka geysto ay ku dhinteen dad ku dhow 500 […]
Diyaaradaha Sacuudiga Iyo Imaaraadka Oo Duqeyn Xoog Leh Ka Wada Magaalada Xudeydah Ee Dalka Yemen.
Diyaaradaha dagaalka ee Xulafada Sacuudiga ayaa wada duqeyn xoogan oo ay la beegsanayaan difaaca maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee gacanta ku haya magaalada xeebta saaran ee Xudeydah. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa Sabtidii sheegay inay iska caabiyeen duulaanka uga […]